တယ်လီဖုန်းလုပ်ငန်းရှင်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ Duty နမူနာ – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / တယ်လီဖုန်းလုပ်ငန်းရှင်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ Duty နမူနာ
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 366 views
အက္ခရာစဉ်ကိုရယူသုံးခြင်းဖြင့်သတင်းအချက်အလက် Give, ပထဝီ, သို့မဟုတ်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ. သီးသန့်ငွေတောင်းခံမှုလိုအပ်ချက်များကိုသုံးပြီးဝယ်လက် Assist. Might guide youngsters or people with physical problems to generate telephone calls and manage emergency calls.
Active-Listening-To what other people assert giving complete attention,, taking time to recognize the points being built, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးခွန်းများကိုမေးမြန်း, မှားဖြစ်ကြောင်းအခါသမယမှာလမ်းပြနေမဟုတ်.
Criticalthinking-Using judgement and reasons to spot flaws and the benefits of alternate options, အခက်အခဲများမှစိတ်ကူးများသို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
Tracking-OverseeingORDiscovering functionality of yourself, အပိုဆောင်းတစ်ဦးချင်းစီ, သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသည်မှန်ကန်သောလုပ်ရပ်များယူသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ရန်.
အခြားသူများစပ်လျဉ်း control-ပြောင်းလဲလုပ်ရပ်များ’ အပြုအမူ.
installation-ထည့်သွင်းခြင်း devices များ, ဂီယာ, cabling, သို့မဟုတ်အစီအစဉ်များကျန်တာတွေတက်ဖြည့်ဆည်းရန်.
Operations Monitoring-Watching additional indications, ဘူးသီး, or tests to be sure an appliance is functioning correctly.
Quality-Control Evaluation-Conducting assessments and inspections of products, ပံ့ပိုးပေး, or procedures to evaluate excellent or functionality.
Systems Analysis-Determining howasystem must perform and the way improvements in businesses, အခြေအနေများ, as well as the environment can influence results.
Methods Evaluation-Distinguishing steps or signs of system performance as well as accurate or the activities needed to boost effectiveness, အဆိုပါစနစ်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီ.
Administration of Financial Resources-Deciding how dollars is likely to be spent to get the task completed, ဤကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. အရောင်း.
ဝန်ထမ်းအရင်းအမြစ်များ-ရယူ၏စစ်ဆင်ရေး, ဖှယျ, သူတို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဦးဆောင်, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်များအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးလူတွေကိုကွဲပြားခြားနားသွား.
high-ကျောင်းအဆင့် (GED သို့မဟုတ် High School တွင်ညီမျှသောအရည်အချင်းသို့မဟုတ်)
ဒီထက်-ထက် High School တွင်ဘွဲ့
ဇွဲ – 90.18%
စီမံကိန်း – 81.02%
ထိန်းချုပ်ရေး – 80.11%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 91.20%
အခြားသူများအဘို့ကိစ္စ – 85.53%
လူမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – 86.27%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 93.60%
ဖိအားစာနာထောက်ထားရေး – 98.60%
ယုံကြည်စိတ်ချ – 96.20%
ရှုထောင့်မှအာရုံစူးစိုက်မှု – 91.40%
ယုံကြည်စိတ်ချရသော – 97.00%
လွတ်လပ်ရေး – 86.35%
တီထွင်ဖန်တီးမှု – 82.32%
analytical အတွေးအခေါ် – 81.53%